भोट कसरी हाल्ने ? जान्नुभएको छ ? (यसो गर्नुस्) – खुल्लामन्च : समुदायको आवाज
भोट कसरी हाल्ने ? जान्नुभएको छ ? (यसो गर्नुस्)
प्रकाशित: २०७४ वैशाख ३० गते १:५१
२. सातै जनालाई भोट हाल्नुपर्छ कि कुनै एक वा दुईलाई मात्रै पनि हाल्न पाइन्छ ?
३. प्रमुख वा उपप्रमुखमा फरक-फरक पार्टीलाई मत दिन सक्छु रु कसरी दिने ?
९. पार्टीको चुनाव चिहृनमाथि नै स्वस्तिक छाप हान्दा मत बदर हुन्छ ?
त्यस्तै दुई वटा चुनाव चिहृन रहेको कोठाको बीचमा एक अर्कालाई छुने गरी गरी स्वस्तिक छाप लगाएमा पनि तपाईको मत बदर । उम्मेदवारको चिहृन रहेको कोठाभन्दा बाहिर स्वस्तिक छाप लगाएमा मत बदर हुन्।